Eny amin’ny lycée : hampiharina ny taona 2020-2021 ny fandaharam-pianarana vaovao | NewsMada
Eny amin’ny lycée : hampiharina ny taona 2020-2021 ny fandaharam-pianarana vaovao
“Hampiharina manomboka amin’ny taom-pianarana 2020-2021 ny fandaharam-pianarana vaovao ho an’ny ambaratonga fahatelo eny amin’ny lycée ho an’ny kilasy 2nde ka hatramin’ny kilasy famaranana”, hoy ny talen’ny sekoly ambony manofana ho mpampianatra (ENS), Ramanambelina Henriette, omaly, teny Ampefiloha. Hosantarina amin’ny fanavaozana ny fandaharam-pianarana ho an’ny kilasy seconde ny asa amin’ity taona ity. Mitohy ho an’ny kilasy 1ère ny taona hoavy ary hofaranana amin’ny kilasy famaranana ny taona 2020. Vonona ny fandaharam-pianarana nohavaozina ny taona 2020-2021 ary manomboka eo koa ny tsy fampiharana intsony ny sokajy A-C-D amin’ny fanadinana bakalorea. Hoferana ho L (littéraire) sy S (scientifique) ary miampy ny série économie et science sociale (SES) ny sokajy azon’ny mpiadina hisafidianana. Tsy vitsy ny sekoly tsy miankina efa ahitana ny SES eto amintsika fa mbola tsy ampiharina amin’ny sekolim-panjakana izany, araka ny fanazavany ihany. Tokony hofoanana mihitsy ny sokajy A2 ary soloina ity SES ity satria manalasala ny sokajy A2. Matetika tsy mahita izay lalam-piofanana tena mety aminy ny mpiadina manana io mari-pahaizana io aorian’ny bakalorea.
Nisy ny andrana natao tamin’ny taona 2008
Hanao tantsoroka ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena amin’ny famolavolana ny fandaharam-pianarana isaky ny taranja ny teknisianina avy eny amin’ny sekoly ambony fanofanana ho mpampianatra. Hahitsy ny taloha ary hapetraka koa ny fanovana mba hifanaraka amin’ny tsenan’ny asa sy ny fivoarana manaraka ny vanim-potoana misy ankehitriny. Nisy ny andrana efa natao amin’ny fanavaozana ny fandaharam-pianarana ny taona 2008-2009 fa ravan’ny krizy nitranga teto amintsika.
Nanao sonia fiaraha-miasa ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny talen’ny ENS, omaly, hamaritana ny anjara andraikitry ny roa tonta ho an’ny efa-taona manaraka momba ny fanavaozana ny fandaharam-pianarana eny amin’ny lycée. Satria mampianatra eny amin’ny CEG sy ny lycée ny olona mivoaka avy eny amin’ny ENS, hisy koa ny fanovana miandalana ny fahalalana atolotra ny mpianatra miofana ho mpampianatra hifanaraka amin’ny fandaharam-pianarana vaovao.